Ho lasa fanatanjahantena ara-drariny ny masoivoho Brand!
Home » Programme Ambassador
Famerenana ny fandaharan'asa fanatanjahan-tena Brand
Tianao ve ny mampiasa media sosialy? Manana bilaogy Fitness ve ianao? Ankafizo manampy ny olona hitahiry vola? Raha efa namaly eny amin'ireo fanontaniana ireo ianao dia tianay ianao hanampy anao hampiely ny vaovao momba ny Fitness Rebates! Ao amin'ny Fitness Rebates, mivoaka ireo tapakila sy fifampiraharahana mifandraika amin'ny fanatanjahan-tena tsara indrindra amin'ny Internet izahay! Ny Ambassadors momba ny Fitness Rebates dia manampy amin'ny fizarana ny fifanarahana ataonay ary hampiely ny vaovao momba ny tranonkalantsika.
Inona no tadiavintsika?
Izahay dia mitady olona any Etazonia sy Kanada izay boribory tsara ao amin'ny fiarahamonina ara-pahasalamana sy ara-batana. Tokony hanana fientanentanana amin'ny fahasalamana ianao ary ho mavitrika amin'ny media sosialy toy ny Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube, sns. Manaiky olona avy amin'ny sehatry ny fahasalamana izahay, anisan'izany ny bodybuilding, crossfit, arts martiaux mifangaro, yoga, pilates, zumba, triathlons, marathon, bisikileta, ady totohondry sns.
Inona no andraikitro amin'ny maha-Ambasadaoro ahy?
Amin'ny maha masoivohon'i Fitness Rebates anao dia misy fomba maro isan-karazany ahafahanao manampy amin'ny fampiroboroboana ny marika. Azonao atao ny manampy amin'ny fampiroboroboana anay amin'ny fizarana ny fifanarahanay, amin'ny fanaovana bilaogy momba anay, fizarana karatra fandraharahana, fitafiana / fakana sary miaraka amin'ny gym, sns. Manana hevitra tokana ve ianao amin'ny fampiroboroboana? Hamarino tsara fa hampahafantatra anay rehefa mandefa mailaka anay izahay
Inona no azoko hahatongavana ho masoivohon'i Brand Rebates?
Raha ekena ianao ao amin'ny programa ambasadaoron'ny marika Fitness Rebates, dia hatombokay amin'ny fitaovan'ny Rebates Fitness GRATIS ao anatin'izany ny T-shirt FREE. Zahao amin'ny alàlan'ny anay ny akanjo-t-shirt fitafiana page.
Manan-karena ve ny mpivarotra?
Amin'izao fotoana izao, ny mpaninjara ara-pahasalamana dia tsy manome fanohanana ara-bola.
Tokony ho mpanafika profesora aho hampihatra ny fanatanjahantena ho an'ny fandaharan'asan'ny ambasadaoro britanika?
Tsia, tsy mila atleta matihanina ianao. Mifidy atleta isan-karazany isika.
Raha mieritreritra ianao fa tena mety aminay, dia te-hihaino anao izahay! Mandefasa mailaka amin'i Alex ao amin'ny admin@fitnessrebates.com, mampiasa ny foto-kevitra mailaka "Masoivoho marika Rebates ny fahasalamana". Tsy fantatra izay holazaina? Ampahafantaro anay ny momba anao sy ny antony eritreretinao fa mety tsara amin'ny marika Fitness Rebates. Aza adino ny mampiditra ny piraofilin'ny haino aman-jery sosialy hahafahanay mijery anao! Hiezaka mafy izahay hamaly ny mpangataka rehetra saingy noho ny habetsaky ny valiny dia mety tsy ho tanteraka izany amin'ny tranga rehetra.
Araho ny ambasadera brands amin'ny media sosialy:
Jolay 28, 2014 Admin 2 Comments
Eritreritra 2 momba “Programme Ambassador"
Pingback: Fandaharana bilaogera sy masoivoho | Stylish Momme
Pingback: Fandaharanasan'ny Masoivoho Fitarikana | Stylish Momme